Isbeddello waaweyn oo ku dhacay iPad-kii yaraa ee 2021 | Wararka IPhone
Qaar badan ayaa degay bushimaha malab ku leh imaatinka iPad Pro cusub iyo xaqiiqda ah in Apple ay rabtay inay waqti yar ku dhaafto si loo cusbooneysiiyo noocyada soo jireenka ah ee iPad iyo iPad Mini, si kastaba ha noqotee, waxaan soo qaadannaa war wanaagsan.
IPad Mini-ka cusub ee imaan doona 2021 wuxuu yeelan doonaa USB-C iyo Smart Connector iyo waxyaabo kale oo cusub oo ka dhigaya aalad aan caadi aheyn. Sidan ayaa Apple u dooneysaa inuu ku sharaddeeyo Mini-ka mid ka mid ah kuwa ugu soo jiidashada badan ee is haysta marka ay timaado kiniiniyada, miyaan ku dhammaan doonnaa inaan aragno?
Sida lagu xaqiijiyay gudaha 9to5Mac, awooday inaan ogaado in IPad Mini-ka cusub uu leeyahay magaca summada J310 asal ahaana wuxuu keeni lahaa war xiiso leh, tan hore waxay tahay in iPad Mini uu kori doono Apple A15, mid ka mid ah processor-radii ugu dambeeyay ee shirkadda Cupertino. Laakiin awooddan oo dhan iyada oo aan la xakameynin waa wax aan faa'iido lahayn, waana taas sababta ay u go'aansatay inay ku weheliso USB-C iyo Smart Connector ee loogu talagalay qalabka sida teebabka. Sidan oo kale, Ipad-dhaqameedka ayaa noqon doona kan ugu dambeeya iPad-ka oo leh iskuxiraha danabka, marka mustaqbalka waxaa lagu qoray furaha USB-C ugu yaraan Apple.
Qalabkan A15 wuxuu lahaan doonaa isla nidaamka wax soo saarka shan nanometer-ka ee A14 iyo noockiisa, A15X, sidoo kale miiska ayuu saaran yahay. USB-C-kan ayaa noo oggolaanaya inaan si dhakhso ah oo fudud u helno agabyada iyo nidaamyada xusuusta ee siin doona iPad Mini awoodo badan oo ka badan inta aan qiyaasi karno. Marka la eego dhinacan, tufaaxu wuxuu jebinayaa dhamaan qorshayaashii uu dejin jiray. Waqtigan xaadirka ah, iPad-ka heerka gelitaanka, oo loo yaqaan J181, wuxuu ku dhegi doonaa processor-ka Apple ee A13 iyo qiimo aad u dhexdhexaad ah oo u dhigma 10,2 inji, halka IPad Mini-ka laga bilaabo 2021 waxaa la filayaa inuu u dhexeeyo 8,5 iyo 9 inji.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » Isbeddelo waaweyn ayaa ku dhacay ipad yar yar laga bilaabo 2021